Isicwangciso esiliqili seRPG silindele wena ngeNdoda okanye iVampire | I-Androidsis
Indoda okanye iVampire, uthatha isigqibo kule RPG yeqhinga elikhulu ngebali elipheleleyo lokwazi
Indoda okanye iVampire, eguqulelwe kwiSpanish yile Indoda okanye iVampire, liqhinga le-RPG esemgangathweni ongathandabuzekiyo kwimiba eliqela ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Iinkalo ezinje ngomgangatho wobugcisa, ibali kunye noomatshini bokulwa abancomekayo; ngakumbi kumdlalo oshukumayo namhlanje.
Isithatha ngokupheleleyo kwibali apho kukho "iParadesi"Eli lizwe lingummangaliso apho kuhlala khona imiphefumlo yabo bantu bafileyo. Ngukumkani weparadesi kuphela onokumsindisa kwingxaki ekhulayo kunye nesiphelo sayo, kuba i-vampires igada imida yayo. I-vampire RPG iyonke kunye nokulwa okusekwe ekujikeni, nangona ikwimo yokusebenza eyahlukileyo kunale siyibonileyo mva nje kwi-Android.
1 Indoda okanye iVampire?
2 Iqela liyalwa
3 Ukuba bendinobunzima obuncinci
Indoda okanye iVampire?
Kwiintsuku nje emva kokubonisa enye i-RPG enkulu yasimahla, injani imvelaphi yeVampire Fall, Indoda okanye iVampire, ibibonisa iiveki ezimbalwa ngoku ukuba kuninzi esikubonayo kwindawo yokudlala evela kwi-smartphone.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ibalaselisa ibali kunye nenqaku lomdlalo ngokwawo ukuze sizntywilisele ebalini uqobo. Oku kuyabulelwa, ngaphandle kokuba kubalulekile ukuze ube nakho eyi-RPG yokwenyani esinxilisayo yeso sidingo sokufuna ukwazi ngakumbi ngemvelaphi apho umntu okanye iVampire isilayidi.
Kukwiindawo zokulwa apho kubonakala ngaphezulu ngokwaneleyo, kuba, nangona singalawula i-avatar yethu ngokwamanqanaba ngokunqakraza kwiscreen, xa sifumana utshaba, ziya kuvela iibhokisi zentshukumo esinokuhamba kuzo vampire wethu. Oko kukuthi, ngokombala webhokisi nganye, sinokwazi ukuba siza kuhlala kude, okanye singene ngokuthe ngqo ekulweni nompu ngokuchasene nento embi yokufa.
Umlo okhethekileyo osenza ukuba sifumane umdlalo omkhulu, ikwanayo nenye inkuthazo kubo amaqabane aza kusinceda kwimishini yethu. Konke oku kunongwe ngeentlobo ezininzi zeentshaba kunye noluhlu lwezakhono esiza kufunda. Abo bahlobo banokuqeqeshwa ukuze basincede ngezakhono zabo ukuze sikwazi ukuphelisa naluphi na utshaba oluza kuthi.
Ngokubhekisele kuBuntu okanye kwiVampire, kuxhomekeke kuthi ukusebenzisa enye okanye elinye iziko. Singaziguqula nanini na xa sifuna kwaye iya kuba sithi kuphela abaya kuba nolu khetho. Ngale ndlela sinokusebenzisa inguqu ukuzifumana ngombono we-isometric oya kusikhumbuza ii-greats zohlobo olufana noDiablo.
Ukuba bendinobunzima obuncinci
Indoda okanye iVampire ihlupheka ngenxa yobunzima obuncinci, ngakumbi umdlali oyingcali kolu hlobo lwee-RPG zeqhinga. Eyona nto intle ngayo kukuba ihlala ihlaziywa ngamaxesha athile, ke iya kuba ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba ayiphucule loo nto, ukuze umlo osekwe ekujikeni oxhomekeke kakhulu ekwazini indlela yokukhetha indawo yecandelo ngalinye. iqela lethu.
Kuninzi okunokuthethwa malunga nomba wobuchwephesha, kuba amanqanaba asebenze kakuhle kwaye ulwandiso olulinganiselweyo. Siza kuba neentlawulo ezininzi, kodwa yimizuzwana nje embalwa, ke apha bayayazi indlela yokudlala amakhadi abo. Enye yezinto zayo ezilungileyo kukuphuculwa kwabalinganiswa, kunye noyilo lwayo, kunye nomoya owenziwe kakuhle kunye nezo ndawo zimnyama kunye neendawo ezikhanyayo. Ukuzoba ngokuluyolo kukuyidlala kwisixhobo esinesikrini se-AMOLED, ke ukuba unayo, uyonwabele inkwenkwe eneNdoda okanye iVampire.
Elinye inqaku elihle ekuthandeni kwayo kukuba iguqulelwe kwiSpanish, Oko kuthetha ukuba sinokuliqonda ngokupheleleyo lonke ibali elityhilekayo ezinyaweni zethu njengoko sisiya phambili. Kukho eminye imiba yoomatshini eyintsusa, ke siyishiya kuwe ukuze uzifumanele.
Indoda okanye iVampire sisicwangciso-qhinga esikhethekileyo seRPG eza ilayishwe ngeempawu ezintle kunye nebali levampire elenza ukuba sinamathele ngamehlo ethu anegazi kwiscreen ukufumana okungakumbi. Ungaze ucinge ngokuba negalikhi xa udlala. Uyalumkiswa.
Indoda okanye iVampire
Ukuhanjiswa kobugcisa obukhulu
Iindlela zokulwa ezisekwe ekujikeni
Ifuna ubunzima obuncinci
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Indoda okanye iVampire, uthatha isigqibo kule RPG yeqhinga elikhulu ngebali elipheleleyo lokwazi
Ungalazi njani ixesha elithathwa libhetri kwi-Android